Amaphupho ngemizwa – iAfrika
Asho ukuthini amaphupho ngemizwa? Lokhu kuhlanganisa ukuthukuthela, uvalo, injabulo, ukulamba, isikhwele, isizungu, uthando, ukuzizwa ungajabulile, ukuzwelana kanye nokoma.
Tags Imizwa, Ukuzwa
Uma uphupha ukuthi ukhathele empeleni kuwuphawu oluhle. Kusho ukuthi usebenze kanzima emsebenzini futhi uzothola umvuzo maduzane.
Uma uphupha ukuthi womile kungasho izinto ezihlukene. Uma womile nje kuphela ungaba nesikhathi esinzima maduzane. Uma womile uphuza amanzi kuwuphawu oluhle ngekusasa lakho uma amanzi ehlanzekile kodwa wuphawu olubi uma amanzi engcolile.
Uma uphupha ukuthi abantu bayakudabukela ngoba kunento embi eyenzekile kuwe kusho izinto ezinhle kuwe. Uzothola uthando ebudlelwaneni bakho nabanye kanye nempumelelo ekubangisaneni obhekene nakho manje.
Amaphupho ngokuzizwa ungajabulile
Uma uphupha ukuthi uzizwa ungajabulile kuwuphawu oluhle. Kusho ukuthi uzoba nenhlanhla ekusaseni lakho futhi kunezinto ezinhle ezizayo kuwe.
Tags Isiyezi, Ukungajabuli, Ukungenami
Uma uphupha ukuthi unesizungu futhi awunabo abangani abaseduzane kusho ukuthi maduzane nje uzomenywa emicimbini nasemaphathini amaningi.
Uma uphupha ukuthi unesikhwele ngomunye umuntu kusho ukuthi ubudlelwane bakho nabanye kuzolimala ekusaseni lakho. Kungaba ubudlelwane bakho nabanye abantu noma inkolo yakho.
Uma uphupha ukuthi ulambile ngemvamisa kuwuphawu oluhle ngekusasa lakho. Kusho ukuthi ungumuntu othembekile futhi uzoba nabangani abaningi empilweni yakho nophathina okuthandayo.
Tags Indlala, Ukulamba
Uma uphupha ukuthi uyagodola kusho ukuthi uzobona abangani bakho maduzane nje nibe nesikhathi esimnandi. Uma ugodola kangangokuthi awukwazi ukuyeka ukuqhaqhazela lokho kusho ukuthi uphuza ngokweqile futhi kufanele uyeke isikhashana.
Tags Ukubandelwa, Ukugodolwa
Uma uphupha ukuthi unovalo futhi uzizwa sengathi uzophonsa ithawula kuwuphawu oluhle. Maduzane nje uzoba nenhlanhla ngempela emsebenzini noma esikoleni.